100% Virgin Skived Ptfe Sheet/PTFE Sheet - 100% Virgin Skived Ptfe Sheet/PTFE Sheet PTFE - 100% Virgin Skived Ptfe Sheet/PTFE Sheet Supplier - 100% Virgin Skived Ptfe Sheet/PTFE Sheet Teflon - PTFE ပြား Teflon စာရွက်, PTFE လှံတံပေးသွင်း, PTFE ဘုတ်အဖွဲ့ Teflon ရုပ်ရှင်ပွဲတော်, PTFE ချောင်းတွေ Teflon ဘား, PTFE တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ, သတ္တုပါး
နေအိမ် > Teflon စာရွက် > 100% Virgin Skived Ptfe Sheet/PTFE Sheet -
100% Virgin Skived Ptfe Sheet/PTFE Sheet,100% Virgin Skived Ptfe Sheet/PTFE Sheetအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ် Cox ပလတ်စတစ် အပေါ် Jun 11th, 2015rating: 4.5Quality 100% Virgin Skived Ptfe Sheet/PTFE Sheet supply by COX Plastic100% Virgin Skived Ptfe Sheet/PTFE SheetBest 100% Virgin Skived Ptfe Sheet/PTFE Sheet supply by China COX Plastic with best price.
100% Virgin Skived Ptfe Sheet/PTFE Sheet COX Plastic only offer Virgin PTFE products. ပြန်လည်အသုံးပြုပစ္စည်းပါဝင်တဲ့လျှင်နှစ်ချက်လျော်ကြေး.
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 100 – 1,000 / Piece
Min.Order အရေအတွက်:5Piece/Pieces
supply နိုင်ခြင်း: 1000 Piece/Pieces per Month
100% Virgin Skived Ptfe Sheet/PTFE Sheet Packing & ပို့ခြင်း
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်: wooven bags
မူလအစရာ: Zhejiang, China (တိုက်) ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Cox မော်ဒယ်နံပါတ်: cox ptfe sheet
ပစ္စည်း: PTFE အထူ: 0.5~70MM အရွယ်: 150mm*150mmm~150mm*20M
1.ပစ္စည်း:100% Virgin PTFE
4.Application:making gaskest,seals, စသည်တို့ကို.
Product Description Pure PTFE Sheet : COX Plastic PTFE products includes sheets, rods, tubes, tapes and gaskets, စသည်တို့ကို. They are molded, skived or cut from 100% virgin PTFE. It has the best chemical corrosion resistance among known plastics, without being aging, lowest friction coefficient
အဆိုပါဖြည့် PTFE စာရွက်အများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြုကြသည် Filler ပစ္စည်းများနှင့်အတူရောနှော PTFE ဗဓေလသစ်ပုံသွင်းနေကြတယ်, ဖန်ဖိုင်ဘာ, ကာဗွန်ဖိုက်ဘာနဲ့ဖိုက်, စသည်တို့ကို. ဤသည်က style sheet ချုံ့အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးတက်လျက်ရှိသည်, ပိုကောင်းတဲ့ပွန်းပဲ့ခုခံ, စင်ကြယ်သော PTFE စာရွက်များနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်မြင့်သောအပူစီးကူးခြင်းနှင့်နိမ့်တိုးချဲ့.
Style Products ဆန့်နိုင်အား Pressure/mpa Density g/cm3 Temperature oC
B301M Molded PTFE 15 mpa 12 2.1~ 2.3 -180~+260
ကာဗွန်ဖြည့်ပြီးပြီ PTFE လှံတံ